‘शत्रुगते’ देशैभर आक्रमक, कलेक्सन कति गर्यो ? « Ramailo छ
‘शत्रुगते’ देशैभर आक्रमक, कलेक्सन कति गर्यो ?
मल्टिस्टारर फिल्म ’शत्रुगते’ शनिबार देशैभर आक्रमक व्यापार गर्न सफल भएको छ । मह सञ्चारको ब्यानरमा किरण केसीले निर्माण गरेको फिल्मले शुक्रबार र शनिबार गरी झण्डै दुई करोड नजिकको व्यापार गरेको आँकलन छ । यद्पी फिल्म निर्माण पक्षले व्यापार सार्वजनिक गरेका छैन् ।
‘जात्रा’ निर्देशक प्रदीप भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘शत्रुगते’ ले दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । दर्शकले विशेषगरी फिल्मको कमेडी पक्ष र कलाकारको प्रस्तुतीलाई मन पराएका छन् । लामो समयपछि ठुलो पर्दामा फर्किएका वरिष्ठ अभिनेता हरिवंश आचार्यको भूमिकालाई दर्शकले अत्यन्त रुचाएका छन् ।
अघिल्ला सिरिजमा भन्दा अभिनेता दिपकराज गिरीले ‘शत्रुगते’ मा निभाएको भिन्न भूमिका पनि दर्शकको रोजाइमा परेको छ । दिपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, पल शाह, आँचल शर्मा, राजाराम पौडेल, बसुन्धरा भूषाल, शिवहरी पौडेल, रमेश रञ्जन झा लगायतको भूमिकाबाट दर्शक सन्तुष्ट छन् ।
शनिबार फिल्मको सम्पूर्ण टिम राजधानीको हलहल पुगेको थियो । दर्शकले शत्रुगते टिमसँग सेल्फी खिच्दै फिल्म निकै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए । आइतबार रामनवमी परेकाले फिल्मको व्यापार उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । हल रिपोर्ट हेर्नुस् :